Qarax ka dhacay Gaalkacyo & khasaaro xoogan oo ka dhashay - Awdinle Online
Qarax ka dhacay Gaalkacyo & khasaaro xoogan oo ka dhashay
Qaraxaan oo jugtiisa laga maqlay Xaafado ka tirsan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, waxaana qaraxa ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday hal ruux halka mid kale uu ku dhaawacmay.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in qofka Geeriyooday uu ahaa Darawalka gaariga nooca iska rogaha ah ee carada qaada, kaas oo Magaciisa lagu soo koobay Fadhaye, halak qofkii dhaawaca ahaan la geeyay Isbitaalka guud ee Magaalada Gaalakcyo.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland ee k,a howlgalla magaalada Gaalkacyo ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka sameeyay howlgallo baaritaano ahaa oo aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Labadii Bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa lag deyrinayay xaalada Amni ee Magaalada Gaalkacyo, waxaana horay uga dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo qaarkood lagu dilay dad mas’uuliyiin ahaa iyo Shacab intaba.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo QM kala hadashay dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka
Next articleGuddiga lagu mursan yahay ee doorashooyinka oo ku dhawaaqay isbedel ku yimid jadwalka doorashooyinka